Xuquuqaha iyo waajibaadyada bulshada-daryeelka | Samfunnskunnskap.no
daryeelka qaranku wuxuu ku xidhan yahay in dadka oo dhami bixiyaan dhaqaale markii ay kari karaan. Habka oo dhami wuxuu ku saleysanyahey in cashuurta aan bixino loo qeybiyo si cadaalad ah lana siiyo cidii u baahan. Inteynu noolahey oo dhan waxaan ka faa’iideysaneynaa kaalmooyinka daryeelka. Waxa qof kasta inta uu noolyahey mar ama wax ka badan ku iman karta xaalad uu gargaar uga baahdo kaalmooyinka daryeelka. Qofka waxa ku dhici shil ama cudur halis ah, waa la shaqo beeli karaa ama masiibooyin kale ayaa qofka noloshiisa ku iman kara. Markaa waa muhiim in la ogaado in lagu gacan qabanayo.
Marka uu qofku caafimaad qabo ee uu shaqayn karo, shaqada iyo cashuurta uu bixinayaa wax bay taraysaa. Dhinac marka la eego wax hore laguu siiyey ayaad iska bixineysaa, ama waxyaabaha aad mustaqbalka u baahan doonto. Dadka badankoodu waxay sidan u arkaan nidaam fiican. Nidaamka daryeelka bulshada dadku waxay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad dhaqaale.
Tusaalooyinka xuquuqda waxa ka mid ah lacagta jirada, lacagta shaqo la’aanta, kaalmada barmaamijka hordhaca, kaalmada carruurta iyo lacagta hawlgabka.
Tusaalooyinka waajibaadka waxa ka mid ah in cashuur la bixiyo, inaan lagu xadgudbin nidaamyada dhaqaale iyo in dawlada la siiyo macluumaad sax ah oo ku saabsan qofka xaaladiisa nololeed.
Xornimo iyo masuuliyad
Dhammaan dadka deggan dawladda-daryeelka ee noorwiijiga, waxa ay leedahay xornimo iyo masuuliyad, xuquuq iyo waajibaad.
Waxaan xor u nahay in aan dooranno sida aynu u nool nahay nolosheenna. Isla markaa waxa ina saran masuuliyad ah in aan raacno sharciga iyo xeerarka si nidaamku ugu shaqeeyo sida loo la jeedo.